Ukuxhumana kusebenza kanjani kubha yomsindo?
Lapho ukhetha ibha yomsindo, qiniseka ukuthi ukhetha eyodwa enokuxhumeka okulungile kwe-TV yakho nezinye izinto. Kunezindlela ezimbili eziyisisekelo zokuhlanganisa ibha yomsindo kusistimu yakho. Indlela ejwayelekile ukusebenzisa i-TV yakho njengehabhu lokushintsha: uxhuma isidlali sakho se-Blu-ray, ikhebuli o ...
Ingabe Amabha Womsindo Ayasebenza Kumculo?
Ngokuthandwa kokudlala komculo okungenantambo, akumangazi ukuthi imigoqo eminingi yomsindo manje isinikeza lelo khono. I-Bluetooth® eyakhelwe ngaphakathi ikuvumela ukuthi usakaze umculo kalula kusuka kwi-smartphone yakho, ithebulethi, noma ikhompyutha esebenza nge-Bluetooth. Isebenza nomculo ogcinwe efonini yakho ...
I-Stereo noma i-Surround Sound?
Kuyafaneleka ukuphinda ukuthi noma iyiphi ibha yomsindo izwakala kangcono kangcono kune-TV yakho. Amabha womsindo ayisisekelo avame ukuba yimiklamo ye-stereo ekhiqiza imininingwane efanayo yesiteshi yangakwesokudla nangakwesobunxele njenge-TV yakho. Kepha zizwakala zibonga okukhulu kakhulu kuzipikha ezinkulu ezinikwe amandla yi-ampl ...
Ibha yomsindo noma i-Sound Base?
Kuze kube manje, besikhuluma ngamabha womsindo anawo umugqa omude, omncane webha. Kepha kukhona olunye uhlobo: ibha yomsindo yesitayela sepulatifomu, futhi kwesinye isikhathi ibizwa ngokuthi isisekelo somsindo. Lo mklamo obanzi, ophansi uhlala ngaphansi kwe-TV yakho futhi uyawusekela. Izisekelo zemisindo zine ...
Kuthiwani nge-Subwoofer yebha yami yomsindo?
Uma ucabanga ukuthi ungafuna ibha yomsindo nge-subwoofer ehambisana nayo, lokho kunganciphisa izinketho zakho zokubekwa kancane, kepha mhlawumbe ngaphansi kokulindelekile. Kungenxa yokuthi cishe wonke lawa ma-subwoofers awanazintambo. Okusho ukuthi, bathola isignali yomsindo ngaphandle kwentambo kusuka ...
Uhlelaphi Ukubeka Ibha Yakho Yomsindo?
Ukwazi ukuthi uzobeka kuphi ibha yomsindo wakho kuzosenza lula isinqumo sakho ngokushesha futhi kunciphise izinketho zakho. Kunezinketho ezimbili eziyisisekelo. Uma i-TV yakho ilenga odongeni ungafaka ibha yomsindo ngezansi kwayo ukuze ubukeke kahle, ungaminyene. Uma ufuna ...
Kungani Ngidinga Ibha Yomsindo?
Izinsimbi zemisindo ziye zaqhuma ukuthandwa eminyakeni yamuva, futhi inani lamamodeli liye laqhuma ngokufanayo. Ngakho-ke sihlanganise lo mhlahlandlela wokuthenga ukukusiza ngokushesha ukuthola ukuthi iyiphi iphunga lebha yomsindo engakusebenzela kangcono. Ibha yomsindo uhlelo lwe-in-one lwesipikha ...
Yini ibha yomsindo?
Amabha womsindo akhona ngokuba khona kwama-TV-panel TV ... okungenani kuze kube sezingeni elithile. Impela, lezo zikrini ezi-skinny zikhiqize isithombe esicwebezelayo. Kepha izipikha zabo ezincanyana, ezakhelwe ngaphakathi azikwazi nokukhiqiza inkhulumomphendvulwano ngokusobala, ingasaphathwa eyokuletha ukuqhuma okukholisayo, ukushayisana kwezimoto nakho konke ...
Izikhulumi ze-Wifi Soundbar, Amabha Womsindo we-Tv, I-Wifi Soundbar YeTv, Tv Futhi Soundbar Mount, Ibha yomsindo ye-Alexa, Ibha yomsindo yeKaraoke,